Vaovao Lingua farany volana Aprily 2019 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Lingua farany volana Aprily 2019
Azafady mba zarao ny fanambarana amin'ny fitadiavana mpandika teny amin'ny tambajotranao!
Voadika ny 24 Jolay 2019 3:25 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana Aprily 2019.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 681 isika, nahasarika mpitsidika 339.873 ary jeripejy miisa 399.822. Nahatratra 261.204 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 260.439 tao amin'ny Twitter.
Ity ny topi-maso mikasika ny fandehan'ny tranonkala rehetra tamin'ny volana lasa
Nanambara ny fitadiavantsika mpilatsaka an-tsitrapo handika teny amin'ny teny Nubia, Japoney ary Makedoniana isika. Miangavy anao mba hizara izany ao amin'ny tambajotranao ho an'ny mpilatsaka an-tsitrpo, mpikatroka ary mpandika teny!
Ireo nitarika tamin'iny volana iny:
Arabo ar 125.765
Espaniola es 19.596
Frantsay fr 17.393
Amharic am 8.867
Arabo ar 41.500
Bangla bn 8.025
Espaniola es 7.575
Frantsay fr 5.570
Aza adinoina ny manaraka ny Lingua ao amin'ny Twitter sy Facebook! Zarao amin'ny namanao sy ny tambajotra azafady ny taratasy fangatahana hanatevin-daharana ny Lingua. Mandika teny amin'ny teny ampolony maro isika! Farany, misorata anarana ao amin'ny vaovaonay mikasika ny Lingua!
15 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana